Ulo Oku Ulo
Home > Ngwaahịa > Ulo Oku Ulo (Total 9 Ngwaahịa maka Ulo Oku Ulo)
Ulo Oku Ulo - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara Ulo Oku Ulo manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube Ulo Oku Ulo na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime Ulo Oku Ulo na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Ngwuputa nke ulo oru nlekota oru ulo oru
Tag: Nnukwu - Ogwe Nkwonkwo Igwe Igwe , Mberede Igwe Ngwá Ọrụ Ụlọ Mbibi , Ogwe Mmiri nke Na-adịghị Awụpụ Mmiri
Mwepụ nke ikpochapụ. Na-ekpuchi ihe mkpuchi na mkpuchi oyi na oyi na oyi. Mgbe ịwụnye panel batrị ahụ, ọ nwere ike igbochi ìhè anyanwụ iji mechie elu ụlọ ma belata okpomọkụ na-ebufe site n'èzí gaa n'ime ime ụlọ. Dika oghere foto nwere ike...
Ala igwe n ​​'okporo oku nke oma
Tag: Onu ogugu otutu - Nhazi okporo uzo , Ụzọ mgbaàmà okporo ụzọ , Atọ - Ngosipụta ụcha agba
A na-eji ogidi igwe iji kwụọ ụgwọ batrị nickel-hydrogen. Mgbe ìhè ahụ zuru ezu, ogidi ndị dị na mbara igwe na-enweta ugbu a na voltaji batrị. N'abalị, batrị na-enye ike eletrik na ibu site na njikwa akara ọrụ. Ihe ndị bụ isi adịghị mkpa ịtọ ụdọ...
Ulo Oku Ulo akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa Ulo Oku Ulo ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma Ulo Oku Ulo kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese Ulo Oku Ulo wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.